လက်တိုအမျိုးသမီးအမျိုးသမီး Rugby Polo | ရပ်ဘီဆိုင်: Sexy Rugby
ကြိုဆို » အမြိုးသမီးမြားအတိုလက်အဘို့အရပ်ဘီရှပ်အင်္ကျီ
Fancy သင့်ရဲ့ဗီရိုမှကြော့ရှင်း၏တစ်နည်းနည်း? တစ်ပိုလိုသတိပညာအမျိုးသမီးများ, အလင်းနှင့်သင့်ဆိုင်နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်အတွက်လုပ်ကြ sexy ရပ်ဘီ !
သင့်ရဲ့ ဝါးတားပိုလိုအမြိုးသမီးမြား S က, M, L, XL နှင့် XXL: ငါးအရွယ်အစားအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစား, သင်မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပါတယ်တဲ့ပိုလိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ 177 g / m²: ဒါဟာအလွန်ပျော့ထည် quilted နှင့်စနစ်တကျကွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှိပါတယ်။ လုံးဝဝါဂွမ်း, အဲဒါကိုလည်းအလွန်အလင်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်ကအပူချိန်နွေဦးနှင့်နွေကာလ၌ထသောအခါဝတ်ဆင်ရန်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပိုလိုချောကအရမ်းသပ်ရပ်နေသောခလုတ်၏သေးငယ်တဲ့အတန်းရှိပါတယ်။
ဆိုင် sexy ရပ်ဘီ သုံးကွဲပြားနှင့်ဖက်ရှင်အရောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဘို့ဤပိုလိုအဆိုတင်သွင်းဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဤရွေ့ကား, အပြာအဖြူနှင့်အနက်ရောင်ရေတပ်သည်: မည်သည့်စတိုင်နှင့်အတူရောနှောနေခြင်းကြောင့်သုံးဂန္! အကယ်လို့သင့်ရဲ့အားကစားရုံအစည်းအဝေးများသို့မဟုတ်တစ်စကတ်စဉ်အတွင်း, နွေရာသီမှာကမ်းခြေပေါ်မှာဤပိုလိုဝတ်ဆင်။ ဒါဟာဂျင်းဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းတဲ့ဘောင်းဘီနှင့်အတူဿုံပေါင်းစပ်။ အဆိုပါဂန္ဖြတ်သင့်ရဲ့ဗီရိုတစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်အပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ပေါ်သည် T-Shirt ရပ်ဂ်ဘီကျွန်တော်တို့ရဲ့လှပသောစုဆောင်းခြင်းစျေးဝယ်
ခလုတ် 5, ribbed ခညျြနှောငျကော်လာနှင့်အင်္ကျီလက်တစ်တန်း
pique ထည် 200 g / m²ဖွဲ့စည်းပုံမှာ
ဖွဲ့စည်းမှု: 95% ဝါဂွမ်း, 5% elastane